ZAZAVAVIKELY VOAOLANA TAO AMBATONDRAZAKA : Iharan’ny ramatahora ny havan’ilay lasibatra, mitaraina amin’ny Fitondram-panjakana
Mirongatra, efa ho isan’andro loatra ny trangana herisetra mianjady amin’ny zaza amam-behivavy eny anivon’ny fiarahamonina malagasy, ankehitriny. 24 novembre 2021
Maro ireo zava-miseho mahonena ary koa tsy hitan’ny Mpitondra Fanjakana, ny mpitandro filaminana, raha ny fitarainana voaray noho ny tahotra mahazo ireo iharan’izany. Lasibatra hatreto ireo zazavavikely tsy ampy taona. Isan’ireo tranga mampiahiahy ny fiarahamonina ny mahazo ilay zazavavikely ao Ambatondrazaka, ka iharan’ny tsindry sy fandrahonana ny fianakaviany manoloana ny tranga mahazo azy ireo.
Zaza 08 taona monja niharan’ny fanolanana nisesisesy
Velon-taraina ny fianakavian’ilay zazavavikely 08 taona monina ao an-tampon-tanànan’Ambatondrazaka amin’izao fotoana izao manoloana ny fanolanana sy herisetra nahazo ny zanak’izy ireo. Ny loharanom-baovao voaray avy any an-toerana momba ity trangam-piarahamonina ity dia ny faha-09 novambra 2021 lasa iny no fantatra sy vaky bantsilana fantatry ny ray aman-dreniny ny trangana nahazo io zazavavikely io. Araka ny nambarany sy fitarainany dia efa nisy nanolana foana izy ary tsy indray mandeha fa imbetsaka no nanaovan’ilay lehilahy nahavanon-doza izao herisetra ara-nofo izao. Voalaza fa lehilahy iray manambady aman-janaka izay mpanofa tranon’izy ireo ihany ity nahavanon-doza saingy norahonany hatrany ilay zaza mba tsy hilaza amin’iza na amin’iza fa raha tsy izany dia vonoiny ho faty. Raha vao nahare ny fitarainan-janany moa ny fianakaviana tamin’io andro io dia nampandre ny Polisy teo an-tanàna avy hatrany mba hijery akaiky ny zava-misy. Efa voasambotra araka izany ity lehilahy ity, misafotofoto tanteraka anefa ny zava-misy hatreto raha toa ka mandà ny fitoriana natao azy izy sy ny vadiny.
Mandrahona ny fianakaviana ny vadin’ity nahavanon-doza
Eo anatrehan’io tranga io àry dia fantatra tamin’ny angom-baovao voaray hatrany fa norahonan’ny vadin’ilay nahavanon-doza ny ray aman-drenin’ilay zaza voaolana. Nanambara ilay vehivavy fa “izay iray migadra aminareo fa manendrikendrika ny vadiko” . Marihina anefa, hoy ny fianakaviana, fa efa vita mialoha ny fisamborana ity nahavanon-doza ny fitiliana rehetra ary voamarina tokoa fa efa simba tanteraka ilay zazavavikely. Nangataka izy ireo mba hatao raharaham-pihavanana saingy tsy nety hatramin’ny farany ny ray aman-drenin’ilay zaza ka nanomboka teo ny savorovoro. Raha tsiahivina dia ny alakamisy faha-11 novambra 2021 lasa teo no efa niakatra fampanoavana ny raharaha, nadoboka am-ponja vonjimaika aloha ity farany. Ny faha -13 desambra 2021 ho avy izao no fantatra fa hiakatra eny amin’ny Fitsarana indray ny raharaha.
Matahotra ny fianakaviana sao ho vitavita mora ny raharaha
Mamaivay tanteraka ny raharaha amin’izao fotoana izao satria dia mandrahona tsy ankijanona ny fianakavian’i Francia hatrany ireto nahavanon-doza ary nanamafy moa izy ireo raha ny fitarainana voaray ihany fa “tsy misy zavatra tsy vitan’ny vola”, hoy ny fireharehan’ny vadin’ilay lehilahy nahavanon-doza. Mivarahontsana tanteraka ny fianakavian’ilay zazavavikely, indrindra fa ny reniny, izay efa nanjary tsy salama kely mihitsy ny sainy noho ny fahadisoam-panantenana nahazo azy tamin’ny zanany izay vao 8 taona monja noviravirain’ity tsy mataho-tody. Ilay zaza rahateo koa tsy afaka manohy ny fianarana intsony noho ny tahotra mahazo azy. Miantso ny Fitondram-panjakana, araka izany, izy ireo hatreto sao ho vitavita mora tsy misy tohiny eny indray ny raharaha na koa ho afaka madiodio ity nanimba ny zanak’izy ireo.
Miantso ny Fikambanana Fitia ihany koa
Raha ny hetahetan’ny fianakaviana niharan’ny herisetra tao an-tampon-tanànan’ Ambatondrazaka ity moa dia maniry izy ireo ny mba handraisana an-tanana ity zaza niharan’ny fanolanana ity satria dia simba tanteraka na ny ara-batana na koa ny ara-tsainy amin’izao fotoana izao. Tsy mbola hitan’ny ray aman-dreniny rahateo koa ny tokony hatao fa dia miandry ny valim-pitsarana amin’ny 13 desambra ho avy io. Manaitra ny fikambanana Fitia izay tarihin-dRamatoa Mialy Rajoelina ireto farany mba hanara-maso akaiky sy handray an-tanana ny raharaha raha azo atao.